စက်တင်ဘာလ 2017 | 20 ၏စာမျက်နှာ 76 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » စက်တင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 20)
DMC စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး (အချိန်ပြည့်) #5188
, UT Duration: လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘပေးမ DMC စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး (အချိန်ပြည့်) #5188 ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Salt Lake City, 09 / 22 / 17 အပေါ် posted 11 / 20 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်ရာထူးအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ: Deseret စီမံခန့်ခွဲမှုကော်ပိုရေးရှင်း (DMC) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းထံမှပြီးစီးမှတဆင့်ဖြစ်ရပ်များထုတ်လုပ်ရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့အောင်မြင်တဲ့နှင့်စိတ်အားထက်သန်စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူးရှာဖွေနေသည်။ ...
ဓာတ်ပုံဆရာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဟိုနိုလူလူ, HI Duration: အမြဲတမ်းလစာ TBD ယောဘသည် KHON09 တစ်ဦးဓာတ်ပုံဆရာရှာဖွေနေသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 22 / 17 /2ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ တာဝန်များတိုက်ရိုက်ပို့ချသို့မဟုတ် On-ကင်မရာအင်တာဗျူးများ Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသောပါဝင်သည်။ လျှောက်ထားသူများသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သတင်းတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုပစ်ခတ်မှုနှင့်တည်းဖြတ်မှတဆင့်တို့သည်ကြီးစွာသောပုံပြင်ကိုပြောပြနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ လျှောက်ထားသူများသည်လည်းရှိရမည် ...
Feature ကိုတာရှည်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များအတွက် Extras ရှာဖွေနေ
Feature ကိုတာရှည်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: စက်တင်ဘာ 29 များအတွက် Extras ရှာဖွေနေ -5/ 2017 / 09 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်အောက်တိုဘာ 22 17 လစာ Paid Extras အနည်းဆုံးလုပ်ခယောဘသည်အင်္ဂါရပ်အရှည်များအတွက် extras ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား Fran Drescher လက်ရှိပူးတွဲပတေရုသ Bogdanovich နှင့်အတူရုပ်ရှင်, ။ နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ Los Angeles မြို့လိုအပ်နေသောူပည်သူ extras Paid non-ပြည်ထောင်စု ...
ကုမ္ပဏီ 09 / 22 / 17 အပေါ် posted စာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဂျက်ဆင်, က MS Duration: မပေးထားလစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 10 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ် WLBT နှင့် Now ကိုက MS သတင်းအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမသတင်းထုတ်လုပ်သူ, Raycom မီဒီယာရဲ့အား NBC Affiliate အတွက် ဂျက်ဆင်, မစ္စစ္စပီ, အဖြစ်တဲအတွက်တွေကိုပေးခြင်းအဖြစ်အဆင်ပြေသောသူတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိအချိန်ပြည့် multi-Platform ကိုသတင်းထုတ်လုပ်သူ, ရှာဖွေနေသည် ...
စာချုပ်ဗီဒီယို Editor ကို
စာချုပ်ဗီဒီယို Editor ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့, ASAP အတွေ့အကြုံကိုယောဘကိုအပေါ်မှီခိုနိုဝင်ဘာလလစာ၏အဆုံးအထိ, CA Duration: အလုပ် POSITION SUMMARY အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 09 / 22 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကိုသင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တည်းဖြတ်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည် အွန်လိုင်းသင်တန်း။ သငျသညျနှစျခုကင်မရာများ, uncolored ရိုက်ကူး, ရှိသမျှကင်မရာကိုတိုက်ရိုက်နှင့် scripted အတူလုပ်ကိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ...
Transcribe / Logger မှ
Transcribe / Logger မှကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration:9/ 25-9 / 29 လစာ $ 11 / နာရီယောဘသည် 09 / 22 / 17 အပေါ် posted 09 / 25 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား9/ 25-9 / 29 များအတွက်အတွေ့အကြုံရှိဒေသခံ PA ဆိုပြီး။ *** ကျေးဇူးပြုပြီးသာသင် logger / ဇာတ်လမ်းအတှေ့အကွုံရှိပါကလျှောက်ထား! rate: $ 11 / နာရီ + ဘာမှ 8 နာရီကျော်အချိန် paid နဲ့တစ်နှစ်ခွဲထုတ်လုပ်မှု $ 12 နှုန်းကမ်းလှမ်းနေသည် ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Seattle, WA Duration:5ရက်ပေါင်း9/ 24 / 09 အပေါ် posted, စတင်သည် 22 / 17 လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 09 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ပေးမအလုပ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အကြောင်းဝေမျှမယ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှာကြံ ကိုင်တွယ်ရန်အားကြီးသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အကောင်းတစ်ဦးမောင်းနှင်စံချိန်နှင့်အရည်အချင်း PA ဆိုပြီး။ ဒါကပျော်စရာနှင့်အဘို့စိန်ခေါ်စီမံကိန်းကိုပါလိမ့်မည် ...
ဓါတ်ပုံပညာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကို,, CA Duration: ဒါရိုက်တာကြာသပတေးနေ့,9/ 28 လစာ 09 / 22 / 17 09 / 28 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ဂီယာနဲ့ DP ရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး ဆန်ဖရန်စစ္စကို, CA. အပြင်ဘက်ကြာသပတေးနေ့, 1 /9အပေါ်တစ်ဦး 28 ရက်ကြာအင်တာဗျူးများအတွက် အားလုံးကင်မရာ, အသံနှင့်အလင်းရောင်ပစ္စည်းကိရိယာများပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ရလိမ့်မည် ...